Gịnị kpatara eji akpọ ha Candles Tea Light Candles?
Ìhè nche anwụ na-arụ ọrụ batrị
Site na mmụba nke ndụ ndị mmadụ, a na-ejikarị ọtụtụ ọrụ aka eme ihe na ndụ kwa ụbọchị iji meziwanye gburugburu ebe obibi na ịrụ ọrụ dị mma. Tii Ìhè kandụlbụ obere ọrụ aka. A na-eji ya eme ihe na ezinụlọ na azụmaahịa n'afọ ndị na-adịbeghị anya.Ụdị tii mara mma na-amasị ụfọdụ ndị ma nwee echiche nke ịzụ tii ọkụ kandụl.
Ị nwere eVer chere ihe kpatara eji akpọ ọkụ tii?
Ebe a n'okpuru okwu from Wikipedia, akwụkwọ nkà ihe ọmụma efu: "Ọkụ tea (nakwa ọkụ tii, ọkụ tii, kandụl tii, ma ọ bụ tii lite, t-lite ma ọ bụ t-kandụl) bụ kandụl dị n'ime iko ọla ma ọ bụ plastik dị mkpa ka kandụl ahụ nwee ike ịmịcha kpamkpam mgbe ọkụ. Ha na-adịkarị obere, okirikiri, na-adịkarị obosara karịa ogologo ha, na ọnụ ala. Igwe ọkụ ọkụ na-enweta aha ha site na iji ha na-ekpo ọkụ teapot, mana a na-ejikwa ya dị ka ihe ọkụ ọkụ n'ozuzu ya, dịka fondue. Ọkụ tea bụ nhọrọ a ma ama maka ọkụ ụda olu yana maka ikpo mmanụ na-esi ísì ụtọ. Uru ha nwere n'elu kandụl taper bụ na ha adịghị agbapụta. Enwere ike ịtọ ọkụ teas n'elu mmiri maka mmetụta ịchọ mma. N'ihi obere nha na ọkụ dị ala, ọtụtụ ọkụ tea na-agbakarị ọkụ n'otu oge. Enwere ike ịkpọ ọkụ tea na-ere ogologo oge ọkụ abalị. A na-amụkwa ha ọkụ maka ebumnuche okpukpe. Igwe ọkụ ọkụ nwere ike ịbịa n'ụdị na nha dị iche iche, obere na nnukwu, yana oge ọkụ na isi ísì. Agbanyeghị, oriọna tea na-adịkarị mkpụmkpụ yana cylindrical, ihe dịka 38 mm (1.5 in) na dayameta site na 16 mm (0.63 in) dị elu, nwere waks na-acha ọcha na-esighị ụtọ.
Na mgbakwunye na omenala tiiọkụ dị ka akọwapụtara na Wikipedia, enkuzi(ike anyanwụ ma ọ bụ batrị kwadoro) ìhè tealight kandụlsabụrụla ndị ewu ewu ka teknụzụ ọhụrụ na-adị. Ha na-egosipụtas LED bulbs, na-arụ ọrụ nke ọma ma na-egbuke egbuke. Ha nwere ike ịbịa n'ọtụtụ agba dị iche iche iji tọọ ọnọdụ, kwekọọ na ihe ndozi. Ụfọdụ nwekwara ike iji ngwa igwe ma ọ bụ eletrọnịkị dị iche iche were megharịa ire ọkụ na-akpụ akpụ.
Kandụl tii na-enye ọkụ anyanwụ ma ọ bụ batrị ejiri ya oriọna oriọna dị nnọọ nchebe karịa ọkụ tii nke na-ere ọkụ, a pụkwara ịhapụ ya n'echeghị ya n'ihi na ọ dịghị ọkụ ma ọ bụ okpomọkụ na-emeghe. nke na-ebute ihe egwu ọkụ ichegbu onwe ya. Nke a na-enye ohere ka etinye ha n'ime ihe owuwu lace kwụ ọtọ, ma ọ bụ n'ime ìhè tealight ndị na-ejide akwụkwọ, osisi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-ere ọkụ. Enwere ike ime ka ha dị ntakịrị ka ọ dabara ebe nnukwu ọkụ tii na-ere ọkụ enweghị ike.
Igwe ọkụ eletrik mee ọ bụghị hapụ ọtụtụ nke okpomọkụ, n'ihi ya, ha adịghị adabara ndị na-ekpo ọkụ teapot ma ọ bụ ihe ọkụ ọkụ ndị ọzọ.
Zhongxin Lighting bụ otu n'ime ọkụ emeputa na China, ọkachamara na ntụkwasị obi ji achọ ọkụ soplaya, kandụl na-enweghị ire ọkụ gụnyere kandụl na-agba ọkụ nke anyanwụ bụ otu n'ime ụdị ngwaahịa anyị, a na-anabata gị ịhapụ anyị nchegbu gị niile gbasara ọkụ ịchọ mma, anyị nwere obi ụtọ ịzaghachi n'oge.
Lelee ngwaahịa ndị ọzọ
Candle anyanwụ Maka oriọna dị n'èzí
Igwe ọkụ tii anyanwụ kandụl ịchọ mma n'èzí maka oriọna
Ọkụ ọla kọpa Waya Ball Novelty Patio String Light
Ọkụ ọkụ bọọlụ Rattan Ball na-akwado anyanwụ
Ozi ama ama
Ogologo oge ole ka ọkụ tii LED na-adịru?
Ị nwere ike imechi nche anwụ patio na ọkụ na ya?
Kedu ka ị ga-esi dochie batrị ahụ maka ọkụ nche anwụ
Kedu ka ọkụ ọkụ nche anwụ Patio si arụ ọrụ?
Igwe anwụ anwụ kwụsịrị ịrụ ọrụ - ihe ị ga-eme
Kedu ihe eji ọkụ anwụ anwụ?
Kedu otu ị ga-esi akwụ ụgwọ ọkụ anyanwụ maka oge mbụ?
Kedu otu m ga-esi tinye ọkụ ọkụ LED na nche anwụ Patio m?
Ịchọta ụdị ọkụ ekeresimesi dị iche iche maka ịchọ osisi ekeresimesi gị mma
Ihe ndozi ọkụ n'èzí
Ihe eji achọ eriri ihe eji achọ mma nke China na-eme akwa-Huizhou Zhongxin ọkụ
Igwe ọkụ eriri eji achọ mma: Gịnị kpatara ha ji ewu ewu?
Ọbịbịa ọhụrụ - ZHONGXIN Candy Cane Light Rope Christmas
Platform sdop nke ụwa 100 B2B- Ọkụnye ọkụ na-achọ mma.
Igwe ọkụ kandụl anyanwụ 10 kacha ewu ewu na 2020
Oge nzipu: Nov-18-2021
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ HUIZHOU ZHONGXIN LIGHTIGN CO., LTD.